भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि आ*त्मह*त्या गरेका कर्मचारीको गोजीमा भेटियो सु*साइड नोट: अख्तियार प्रमुखज्यू, २ सय वर्ष बाँच्नुस्, शुभकामना ! « Etajakhabar
भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि आ*त्मह*त्या गरेका कर्मचारीको गोजीमा भेटियो सु*साइड नोट: अख्तियार प्रमुखज्यू, २ सय वर्ष बाँच्नुस्, शुभकामना !
प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७६, सोमबार ११:४२
काठमाडौं, २७ साउन । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका मालपोत कार्यालय, कलंकीका तत्कालिन कर्मचारी हरि आचार्यले दुई पृष्ठ लामो ‘सुसा८इड नोट’ लेखेर आ८त्मह८त्या गरेका छन्। उनले आफु निर्दोश रहेको बताउँदै अपमान सहन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको संकेत गरेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १० घर भएका आचार्यको श८व प्रहरीले आइतबार त्रियुगा नगरपाकिला ९, रातामाटेस्थित शिखरकट्टे भन्ने ठाउँका जंगलमा झुण्डि८एको अवस्थामा फेला पारेको थियो।
उनले सु८साइड नोटमा परिवालाई समेत केही निर्देशन दिएका छन्। उनले श्रीमती छोराछोरीलाई मिलेर बस्न आग्रह गरेका छन्। आफ्नो बैंक खातामा भएको रकमसमेत उल्लेख गरेर छोरालाई राम्रोसँग पढ्नु भन्दै लेखिएको सुसा८इड नोट फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
मृ८त भेटिएका आचार्य शनिबारमात्रै काठमाडौंबाट उदयपुर फर्किएका थिए। त्यसपछि घरमा झोला र मोबाइल राखेर उनी निस्किएका थिए।बे८पत्ता भएपछि उनलाई शनिबार दिनभर खोजी गरिए पनि फेला पारिएको थिएन। अन्ततः घर नजिकैको जंगलमा उनको श८व झुण्डि८एको अवस्थमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
अख्तियारले ९२ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी हाउजिङका नाममा नामसारी गरेको भन्दै नायब सुब्बा आचार्यसहित कलंकी मालपोतका अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नक्कली जग्गाधनी मीनाकुमारी थापा, सुयल हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल थापा, मीनाकुमारी थापाका वारेस दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ता बाबुराम ९शर्मा० रेग्मी र अधिवक्ता योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध गत जेठको दोस्रो साता मुद्दा दायर गरेको थियो।